Matafura nezvingoro zvemabhuku zveZvapupu zvaJehovha
Tanzania: Zvingoro zvemabhuku zviri kufarirwa nevanhu muDar es Salaam
KUNYANGE zvazvo kuparidza paimba neimba ichiri nzira huru inoshandiswa neZvapupu zvaJehovha pakuparadzira chokwadi cheBhaibheri, kushandisa matafura nezvingoro zvemabhuku zvinoyevedza inzira iri kubudirirawo chaizvo pakuparidza mashoko akanaka oUmambo hwaMwari. (Mat. 24:14) Vaparidzi voUmambo vari kushandisa matafura, nezvimwewo zvokuisira mabhuku kuti vaparidzire vanhu munzvimbo dzinopfuura nevakawanda. Uyewo ungano dziri pasi rese dzakatumirwa zvingoro zvemabhuku zvinosvika 250 000. Izvi zvakaguma nei?
Kubvira pakatanga chirongwa chekuparidza munopfuura nevakawanda mumaguta makuru muna 2014 kuDar es Salaam, Tanzania, vanhu vanoda kusvika 700 vakakumbira kudzidza Bhaibheri. Vanhu vakawanda vanofarira vari kupinda misangano uye vari kuswedera pedyo naMwari. Mugore rimwe chete, vanhu venyika dzemuAfrica uye vanobva mhiri kwemakungwa vakatora zvinyorwa zvinopfuura 250 000 pazvingoro zvemabhuku.
KuSolomon Islands, uko kune vaparidzi vasingasviki 2 000 vari kuparidza mundima yakakura ine zvitsuwa zvinopfuura 300 zvinogarwa nevanhu, kuparidza munopfuura nevakawanda mumaguta makuru yava nzira inokosha chaizvo pakuparadzira mbeu yechokwadi. Muguta guru reko reHoniara, hama dzakaparadzira magazini anopfuura 104 000 uye mabhurocha anopfuura 23 600, uye akawanda acho aipiwa vanhu vanobva kuzvitsuwa nemisha iri kwayo yega kusina Zvapupu. Masikati emusi mumwe chete, hama dzakapa vanhu mabhuku 400 aBhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? uye vanhu 60 vakakumbira kudzidza Bhaibheri.
Mumwe musi ari mangwanani, Michael naLinda avo vari kushanda semapiyona enguva dzose, vakanga vachiisa tafura yemabhuku pedyo nemhenderekedzo yepachitsuwa cheMargarita Island, kuVenezuela. Mumwe murume anonzi Aníbal akauya patafura yacho uye akatora bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? Murume wacho akavaudza kuti baba vake vakafira pamhenderekedzo ipapo makore manomwe akanga apfuura, uyewo kuti kubvira ipapo, amai vake vainge vakaora mwoyo. Vhiki rakatevera, Aníbal akadzoka uye akaudza Michael naLinda kuti zuva iroro ndiro ravaiyeuka kufa kwababa vake. Akabudisa foni yake ndokufonera amai vake uye akakumbira Michael kuti avape mashoko anonyaradza, uye ndizvo zvakaitwa naMichael. Kubva ipapo Michael naLinda vakafonerwa naamai vemurume uyu kanoverengeka, uye vari kukurukura navo magwaro anonyaradza. Amai vaAníbal vakanyora imwe meseji vachiti, “Nhasi ndiri kunzwa zviri nani nekuti makandinyaradza uye makandibatsira kuti ndiwedzere kuva nekutenda.”
Chirongwa chokuparidza munopfuura nevakawanda mumaguta makuru chakatangwa munzvimbo 127 mumaguta 14 emuUnited States. Mumwedzi minomwe yekutanga yegore rebasa ra2015, zvidzidzo zveBhaibheri 8 445 zvakatangwa. Nzira iyi yekuparidza nayo iri kubatsirawo chaizvo vakawanda vaimboita mabasa echiKristu kuti vadzoke zvakare pakunamata kwechokwadi. Semuenzaniso, murume anonzi Terry ainyatsocherechedza mabhuku edu pane imwe tafura kuLos Angeles, California, saka murume nemudzimai vakanga vari patafura yacho vakamubvunza kuti akamboverenga mabhuku edu here. Akataura kuti aiva mumwe weZvapupu zvaJehovha asi akanga ava nemakore mana asingaiti mabasa echiKristu. Murume nemudzimai ava vakaverenga naye Ezekieri 34:11 ndokukurukura naye panonzi naJehovha: “Ini pachangu, ndichatsvaka makwai angu, ndoatarisira.” Vakamuudza nezvejw.org uye JW Broadcasting. Mangwana acho mangwanani, Terry akanyorera hama yacho e-mail achitaura kuti nguva pfupi asati aona tafura yemabhuku, akanga ateterera Mwari kuti amuregerere nekuti akanga asiri kupinda misangano. Akanga akumbirawo kuti abatsirwe kuswedera pedyo naJehovha. Terry akati, “Makandikwazisa nemufaro. Makabva mandiverengera rugwaro rwuya rwunokurudzira, uye makandipa mashoko anondibatsira kuti ndikwanise kudzoka kusangano raJehovha. Uku kwaiva kupindurwa kwemunyengetero wangu.”
MuAddis Ababa, Ethiopia, mune nzvimbo ina dzakasarudzwa kuti dzive neurongwa hwekuparidza munopfuura nevakawanda mumaguta makuru. Mumwedzi mitatu, hama dzakapa vanhu zvinyorwa 37 275, uye vanhu 629 vakakumbira kushanyirwa neZvapupu. Pakati pevakawanda vakatora bhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? paiva nevamwe sekuru vakabva vatotanga kuriverenga. Vakambodzidza pakoreji inodzidzisa zveufundisi uye vaiva nemibvunzo pamusoro paJesu uye Umambo hwaMwari. Saka zuva rakatevera racho sekuru vaya vakadzokera patafura iya kuti vapindurwe mibvunzo yavo. Mangwana acho, vakabvuma kudzidza Bhaibheri uye pakupera kwevhiki vakapinda musangano kekutanga. Iye zvino vari kupinda misangano nguva dzose uye vari kufambira mberi chaizvo.
Ethiopia: Mabhuku emutauro wechiAmharic akaiswa pachingoro muAddis Ababa Ababa
Mumwe murume wechiJudha akasvika patafura yemabhuku kuMexico uye akabvunza hama mbiri dzaivapo kuti dzaiva nebhuku raitaura nezverufu here. Hama dzacho dzakamuudza kuti magazini yadzaiva nayo yaitaura nezverufu yakanga yapera, asi dzakati dzaiva neimwe yaitaura nezveramangwana. Murume wacho akabata hama yacho paruoko achibva ati: “Handina basa nezveramangwana. Ndiri kungoda kuzviuraya chete.” Akabva atanga kuchema. Hama dzakamubvunza kuti nei aida kuzviuraya. “Ndichangobva kufirwa nemwanakomana wangu,” akadaro achichema. Saka hama dzakamuratidza chitsauko 7 chebhuku raBhaibheri Rinombodzidzisei? Dzakamuverengera ndima mbiri dzekutanga pasi pekamusoro kanoti “Panofa Munhu Watinoda” uyewo panoperera chitsauko chacho, panotsanangurwa nezvetariro iripo pamusoro pevakafa. Zvakamubaya mwoyo uye akabata zvakare ruoko rwehama iya uye akabvunza kuti, “Ichokwadi here ichocho?” Hama dzakamujekesera kuti Jehovha achatozadzisa vimbiso iyoyo. Murume wacho akabvunza kuti: “Chii chandinofanira kuita kuti ndizoonana zvakare nemwanakomana wangu?” Hama dzakaronga kuti dzizoshanyira murume uyu kumba kwake. Pavakaenda kumba kwake, akanga akatovamirira, akagadzirira kutanga kudzidza Bhaibheri.
“Jehovha ari kukomborera chaizvo chirongwa ichi,” akadaro mumwe mutariri wedunhu uyo akabatsira pakuronga kuti chirongwa ichi chiitwe muNew York. “Chirongwa ichi hachisi kungobatsira chete pakuparidzira zviuru zvevanhu, asi chiri kutoitawo kuti tikwanise kuonana nevakawanda vasisaiti mabasa echiKristu kana kuti vakadzingwa, kureva ‘makwai akarasika,’ ayo ari kubatsirwa kuti adzoke mudanga.”—Ezekieri 34:15, 16.